Mobile Legends ‘ရှယ်Shake ရှယ်ရ’ ဒေတာပတ်ခ် | Telenor Myanmar
Mobile Legends’ “ရှယ်Shake ရှယ်ရ” data pack in MyTelenor App
MyTelenor App ထဲမှာ ရှယ်စုဘူး 400MB ရက် ၃၀စာ ကို ၄၉၉ကျပ်တည်းနှင့်ဝယ်ယူပြီး Mobile Legends အတွက် စိန်တုံး ၅၀၀၀ အပါအဝင် အခြားသော တန်ဖိုးကြီး Skin များအား အခမဲ့ ကံစမ်းရယူနိုင်ခြင်း
* ရှယ်စုဘူး 400MB ရက် ၃၀စာ
* စိန်တုံး ၅၀၀၀ အပါအဝင် Epic Skins ၊ Special Skin များနှင့် စိန်တုံး ၁၀ တုံး ၊ စိန်တုံး ၅ တုံးကို လဲလှယ်နိုင်သည့် ကူပွန်ကုဒ်များ (စိန်တုံးများရဲ့သက်တမ်း - ၂နှစ်)
* ရက်(၉၀) Mobile Legends အခမဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ ကစားခွင့်
ရရှိလာသောစိန်တုံးအတွက် ကူပွန်ကုဒ်များကိုhttps://m.mobilelegends.com/en/codexchange/ တွင်လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။
1. MyTelenor App ကိုသွာပြီး ရှယ်စုဘူး 400MB ကိုဝယ်ယူ
3. ရှယ် Shake
4. စိန်တုံး ၅၀၀၀ အပါအဝင် တန်ဖိုးကြီး Skin များအား ရယူ (သို့မဟုတ်) အခမဲ့ ရက်(၉၀)စာ Mobile Legends ကစားခွင့် ကံစမ်းရယူ
1. ရှယ်စုဘူးဝယ်ယူပြီးနောက် စိန်တုံးလဲလှယ်ရန် ရရှိလာမည့်စာတိုမှ Link ကိုနှိပ်ပါ
2. ဂိမ်းအတွက် Diamondsများ ရရှိရန် Mobile Legends Website မှာ မိမိရဲ့ Game ID ၊ ရရှိလာတဲ့ ကူပွန်ကုဒ် ထည့်သွင်းရပါမည်။ ထိုနောက် ဂိမ်းထဲသို့ Verification ကုဒ်ကိုပေးပို့ရန် Send ကိုနှိပ်ပါ။ Diamondsများ လဲလှယ်ရန် - https://m.mobilelegends.com/en/codexchange
3. Mobile Legends ဂိမ်းထဲသို့ အတည်ပြုကုဒ်ကို ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
4. သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ ရရှိထားသည့် အတည်ပြုကုဒ်ကို ရိုက်ထည့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
5. နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သုံးစွဲသူအကောင့်ထဲ စိန်တုံးများ ရရှိနိုင်မည်။
အသုံးပြုသူအနေနှင့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာပါဝင်ရန် MyTelenor App နောက်ဆုံးဗားရှင်း 3.15- http://bit.ly/newmytelenor ကိုရယူရမည်။
MyTelenor App ထဲမှာ ရှယ်စုဘူး 400MB ဝယ်ယူပြီး မိနစ် ၃၀ အကြာတွင် ကူပွန်ကုဒ်ကိုပေးပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ရရှိလာသောစိန်တုံးအတွက် ကူပွန်ကုဒ်များကိုhttps://m.mobilelegends.com/en/codexchange/ တွင်လဲလှယ်ရမည်။
အသုံးမပြုရသေးသည့် ကူပွန်ကုဒ်များကို ၂ နှစ်အတွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
ရက်(၉၀) Mobile Legends အခမဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ ကစားခွင့်သည် Mobile Legends ဂိမ်းကစားခွင့်အတွက်သာဖြစ်ပြီး အခြား ဂိမ်းအတွင်း Streaming လုပ်ခြင်း, Facebook, Youtube Videos (or any အခြား third party အသုံးပြုမှု) များအတွက်မပါဝင်ပါ။
MyTelenor App ထဲမှ Mobile Legends ‘ရှယ်Shake ရှယ်ရ’ ဒေတာပတ်ခ် ဆိုတာဘာလဲ ?
တယ်လီနောသုံးစွဲသူများအတွက် အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး MyTelenor App ထဲမှာ ရှယ်စုဘူး 400MB ကို ၄၉၉ကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူရင်း Mobile Legends အတွက်အများဆုံး စိန်တုံး ၅၀၀၀ အပါအဝင် အခြားသော တန်ဖိုးကြီး Skin များအား အခမဲ့ ကံစမ်းရယူနိုင်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ MyTelenor App နောက်ဆုံးဗားရှင်း ကိုရယူပြီး အစီအစဉ်မှာပါဝင်လိုက်ပါ။
Mobile Legend ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှလက်ဆောင်တွေကဘာလဲ ?
ရှယ်စုဘူး 400MB ရက် ၃၀စာ
စိန်တုံး ၅၀၀၀ အပါအဝင် Epic Skins ၊ Special Skin များနှင့် စိန်တုံး ၁၀ တုံး ၊ စိန်တုံး ၅ တုံးကို လဲလှယ်နိုင်သည့် ကူပွန်ကုဒ်များ (စိန်တုံးများရဲ့သက်တမ်း - ၂နှစ်)
ရက်(၉၀) Mobile Legends အခမဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ ကစားခွင့်
ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှလက်ဆောင်တွေ ကိုဘယ်လိုရယူမလဲ ?
MyTelenor App ထဲမှာ ရှယ်စုဘူး 400MB ကို ၄၉၉ကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူ ရှယ်ရှိတ်ပြီး ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှလက်ဆောင်တွေ ရယူနိုင်ပါသည်။
ရရှိလာတဲ့ ကူပွန်ကုဒ်တွေကို စိန်တုံးတွေနှင့် ဘယ်လိုလဲလှယ်ရမလဲ ?
အသုံးပြုသူနေနဲ့ ရရှိလာသောစိန်တုံးအတွက် ကူပွန်ကုဒ်များကိုhttps://m.mobilelegends.com/en/codexchange/ တွင်လဲလှယ်ရမည်။
ကူပွန်ကုဒ်တွေရဲ့ သက်တမ်းကဘယ်အချိန်ထိအသုံးပြုလို့ရလဲ ?
ရက်(၉၀) Mobile Legends အခမဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ ကစားခွင့်သည် အခြား ဂိမ်းအတွင်း Streaming လုပ်ခြင်း, Facebook, Youtube Videos (or any အခြား third party အသုံးပြုမှု) များအတွက်အသုံးပြုလို့ရပါလား ?
အသုံးပြုလို့မရပါ။ ရက်(၉၀) Mobile Legends အခမဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ ကစားခွင့်သည် Mobile Legends ဂိမ်းကစားခွင့်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။
အစီအစဉ်က ဘယ်အချိန်မှ ဘယ်အချိန်ထိလဲ?
အစီစဉ်သက်တမ်းက မေလမှ ပြီးဆုံးကြောင်းမကြောညာခင်ထိ